के प्रेम गरेपछि विवाह गर्नैपर्छ ? « Drishti News – Nepalese News Portal
के प्रेम गरेपछि विवाह गर्नैपर्छ ?
५ आश्विन २०७८, मंगलबार 11:32 am
काठमाडौं । प्रेम र विवाह दुई फरक कुरा हुन् । प्रेम गर्दैमा विवाह गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अर्काथरी भन्छन्, प्रेमको अन्तिम विन्दु भनेकै विवाह हो । जब प्रेम विवाहमा रुपान्तरण हुन्छ, तब मात्र प्रेम-सम्बन्ध सार्थक हुन्छ । प्रेम गर्नुको अर्थ बैंशालु सुखभोग मात्र होइन । त्यसैले जोसँग प्रेम गरिन्छ, उसालाई भावी जीवनसाथीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
कतिपयले क्षणिक मनोरञ्जनका लागि प्रेम गरिरहेका हुनसक्छन् । अहिले त शरीरिक सम्बन्धका लागि जोडी बनाउने चलन छ । कतिले लहडमा प्रेमी, प्रेमिका बनाउँछन् । कतिले देखासेखीमा । कतिले आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि यस्तो जोडी बाँध्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले प्रेमीरप्रेमिकाको रुपमा जोडिन आउने जो कोहिसँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, कहिले काहिँ त्यस्तै प्रेमीरप्रेमिकासँग बिवाह गर्न पुगिन्छ । र, यस्ता दाम्पत्य जीवन सुखमय र सुमधुर हुन्छ भन्ने छैन ।
प्रेम गरिरहँदा प्रेमी, प्रेमिकासँग दाम्पत्य जीवन कसरी बिताउने भनेर चर्चा गरिन्छ । कतिले त फेमेली प्लानिङ समेत गर्न भ्याउँछन् । छोरा जन्माउने कि, छोरी ? नाम के राख्ने ? कहाँ पढाउने ? इत्यादी । हुनसक्छ, प्रेम जीवनलाई रोमान्टिक बनाउन पनि यस्ता परिकल्पनामा डुब्ने गरिन्छ ।
त्यसैले प्रेम सम्बन्धमा रहेकै बेला आफ्ना प्रेमीरप्रेमिकाको आनीवानी, व्यवहार, सोच चिन्तन, उदेश्य, अपेक्षा सबै कुरा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । आफ्ना प्रेमी, प्रेमिकाले आफुसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् ? आफुलाई कुन रुपमा हेरेका छन् ? त्यसबारे बुझ्नुपर्छ ।
प्रेम आँखाबाट सुरु हुन्छ । कसैप्रतिको वाह्य आकर्षण नै प्रेममा रुपान्तरण हुने हो । जब कसैलाई प्रेमी, प्रेमिका बनाइन्छ, तब मात्र उसको असली स्वभाव थाहा हुन्छ । सुरुवाती चरणमा अरुको स्वभाव, आनीबानी थाहा पाउन सकिदैन ।
कस्ता प्रेमी, प्रमिकासँग जीवन बिताउन सकिन्छ ?
यदि प्रेमी, प्रेमिकाले आफ्नो हरेक कुरामा चासो रख्छ, स्वास्थ्यस्थितीमा ख्याल राख्छ, पारिवारिक कुरा जान्न उत्सुक रहन्छ, करियरका लागि सरसल्लाह दिन्छ भने उनीहरु भावी जीवनसाथीको रुपमा स्विकार्न सकिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कुनै न कुनै रुपमा सहयोग एवं सहकार्य गर्ने, दुखसुख साझेदार गर्ने प्रेमीरप्रेमिकासँग बिवाह भएमा त्यस किसिमको दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ ।
प्रेम सम्बन्धमा रहेकै बेला आफ्ना प्रेमीरप्रेमिकालाई जीवनसाथीको रुपमा स्विकार्न वा अंगाल्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । यतिबेला के छुट हुन्छ भने, आफ्नो जीवनमा प्रेमीरप्रेमिका मन नपरेको अवस्थामा त्यग्नका लागि कुनै कानुनी प्रावधान पुरा गरिरहनु पर्दैन । सामाजिक मिलोमेसो मिलाइरहनु पर्दैन । त्यसैले यदि आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकाको कतिपय प्रवृत्ति चित्त नबुझेमा ब्रेकअप गर्न सकिन्छ ।